Alote Myanmar - မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် Sales, Business Development အလုပ်အကိုင်များ
အရောင်းပိုင်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် Jobs in Myanmar
အရောင်းပိုင်ဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် အလုပ် 197 ခုရှာတွေ့ပါသည်။
စက်မှုလက်မှု ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ အော်ပရေတာ (122)
Sales Executive For Lashio
လားရှိုး | ရှမ်းပြည်နယ် ရှမ်းပြည်နယ်
Meet sales revenue targets. Develop, implement, and maintain sales activities and plans. Build and maintain long-term relationships with current clients and their management teams by providing information, guidance, and support; recommending service and profit improvements; and recommending new opportunities. Lead and coordinate contract negotiations forasuccessful close. Prepare reports by analyzing and summarizing information.
အကျိုးအမြတ်: * Commission * Meal and Travel Allowance
- Kim Beauty & Fashion House- bkk snack/cosmetic /လူတစ်ကိုယ်ရည်သုံး ပစ္စည်းများ ရောင်းရန် ဖြစ်သည်။ - သွက်သွက်လက်လက်နှင့် အရောင်းပိုင်း ကျွမ်းကျင် ရမည်။ - ရုံးမှ သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းများအား လိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - Sale Target ပြည့်မှီအောင် ရောင်းချနိုင်ရမည်။
Recruiter active 18 hours ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Wellness Investment and Trading Co.,Ltd.
- Logistics လုပ်ငန်းများတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ - 10 တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများလဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ - Basic English speaking ရသူ Computer Microsoft Word , Excel , Email အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Accountant (Mingaladon Tsp)
ကုန်ကျစရိတ် တောင်းခံမှုကို မပြုမီနှင့် အပြီးတွင် စစ်ဆေးခြင်း။ နေ့စဥ်ငွေစာရင်းလုပ်ရန်။ - စာရင်းကိုင်ချုပ်အား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ လစဉ်အစီရင်ခံစာ၏ဒေတာကိုပြင်ဆင်ပါ။ ဌာနခွဲများမှ အစီရင်ခံစာကို စစ်ဆေးခြင်း။ နေ့စဥ်ပေးချေရမည့်ငွေစာရင်းကို စစ်ဆေးခြင်း။
အဝယ်တော် ( Purchaser )
ဆိုင်အတွက် လိုအပ်သော အသား ငါး ၊ ပင်လယ်စာ ၊ အသီးအနှံ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စျေး (သို့) အရောင်းဒိုင်တွင် သွားရောက် ဝယ်ယူရမည်
Recruiter active 17 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Dana business group Co,Ltd
ပုဇွန်တောင် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
အရောင်း နည်းလမ်း မျိူးစုံကို ကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီး သတ်မှတ်ထား သော customer အဟောင်းများနှင့် အလားလာရှိသော customer များဆီသို့ သွားရောက်ပြီး sale plan နှင့် way plan များကို ပြီး မြောက်စေရန် Market အသစ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပြီး အရောင်းမြှင့်တင် နိုင်ရမည် ရန်ကုန်မြို့တွင်း မြို့ပြင် ယာဉ်လမ်းကြောင်းနားလည်၍ ကျွမ်းကျင်စွာ ကားမောင်းနိုင်ရမည်။
ကောင်းမွန်သော marketing communication campaigns များ ပြင်ဆင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း Company မှချမှတ်ထားသော policies and procedures များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း Sales meeting များ စီစဉ် ခြင်း၊ အထက်လူကြီးသို့ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း Customer များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းထားခြင်း Customers များ၏ ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိမရှိ အကြံပြုချက်များ ပြန်လည်တောင်းခံရန် market အသစ်များရရှိရနန်ဆောင်ရွက် ြပီး ရောင်အားကောင်းမွန်စေရန် ဆောင်ရွက်ရမည် အပတ်စဉ်၊ ၃ လ၊ ၆ လ၊ နှစ်အလိုက် Sales reports များ ရေးဆွဲ တင်ပြရမည် Understands how to make products appeal to clients based on the environment and current trends. Always looks for new ways to make products attractive to customers. Able to explain about products and can learn quickly for products. Other duties, responsibilities, and qualifications may be required and/or assigned as necessary.
အကျိုးအမြတ်: Reward for over performance, Social Security Board, Uniform, Ferry,
Recruiter active 26 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Project Assistant- ၄၄ ဦး လုပ်ငန်းတာဝန် - မိမိတာဝန်ကျသည့်မြို့နယ်တွင်ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ရမည်။ - Touch Screen Mobile Phone (1) လုံးရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။ - ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန်လိုအပ်ပြီး ပေးအပ်သောတာဝန်များကိုကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ အကျိုးခံစားခွင့် - အခြေခံလစာ+ Incentive+ အချိန်ပိုကြေး+ ခရီးစရိတ် နှင့် ဖုံးဘေလ် လျှောက်ထားနိုင်သည့်မြို့နယ်များ - (၁) လှိုင်သာယာ (၂) ရွှေပြည်သာ (၃) စမ်းချောင်း (၄) ကမာရွတ် (၅) တာမွေ (၆) ဗဟန်း (၇) သင်္ကန်းကျွန်း (၈) လမ်းမတော် (၉) လသာ (၁၀) ပန်းဘဲတန်း (၁၁) ကျောက်တံတား (၁၂) ဗိုလ်တထောင် (၁၃) ပုဇွန်တောင် (၁၄) ကြည့်မြင့်တိုင် (၁၅) အလုံ (၁၆) မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (၁၇) ဒဂုံ (၁၈) လှိုင် (၁၉) ဒေါပုံ (၂၀) သာကေတ (၂၁) တောင်ဥက္ကလာ (၂၂) ရန်ကင်း
Sales And Marketing (Mandalay)
မြန်အောင်မြေ | မန္တလေးတိုင်း မန္တလေးတိုင်း
မန္တလေးမြို့နယ် အတွင်းသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည် အရောင်းပိုင်း ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည် စားသောက်ကုန် ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချရေးတွင် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရမည်
အကျိုးအမြတ်: Working hours - 8:00am to 5:00pm တစ်ပတ် တစ်ရက်ပိတ်ပါသည်
Yaung Ni Oo Automobile Company Limited
- အရောင်းပြခန်းသို့လာရောက်သူများအား ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများကို နားလည်သဘောပေါက်ကာ အသင့်လျော်ဆုံးကားအားပြသပေးခြင်း။ - ကားအားလုံး၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို နားလည်ခြင်း မတူညီသော ပြိုင်ဘက် မော်ဒယ်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအပါအဝင် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အလားအလာရှိသော ဝယ်ယူသူအား ပေးဆောင်ခြင်း။ - ဖောက်သည်များကို စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ယာဉ်အင်္ဂါရပ်များကို သရုပ်ပြခြင်း။ - အနာဂတ်တွင် ရောင်းအားတက်လာစေရန် အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ခြင်း။ - Maintainingacustomer database and communicating with them. - Assisting customers with completing the relevant paperwork required forasuccessful sale to be processed. - Collaborating with team members to reach sales targets. - Assisting with the set up of showroom and promotional displays.
အကျိုးအမြတ်: - Commission ရမည်။ - ခရီးစရိတ်ပေးမည်။ - Performanceပေါ်မူတည်သောဆုကြေးများရှိမည်။
Recruiter active 8 mins ago The recruiter at this company was last active reviewing applications.
Sales & Marketing ဝန်ထမ်း
( အိမ်/ခြံ/မြေ အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအတွက် ခန့်ရန်) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
- Company ၏ လစဥ် Sales Planများကို အထက်လူကြီးများနှင့်တိုင်ပင်ကာ ရေးဆွဲရမည်။ - Sale Teamများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး Sale Channelအမျိုးမျိူးတွင် နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံးပီး လစဥ် Sale Target ပြည့်မှီစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည်။ - Sale Reportများ ကိုအထက်လူကြီးများထံ လချုပ် ၊နှစ်ချုပ် တင်ပေးရမည်။ - ပြိုင်ဘက်များ၏ သတင်းအချက်လက်များကို Market Research လုပ်ခြင်း၊ - Internel Organization Researchလုပ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရမည်။
အင်းစိန် | ရန်ကုန်တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်း
(၁) Sale ဌာနမှတက်လာသော order များအား မန်နေဂျာ၏ကွပ်ကဲမှုဖြင့် Voucher ထုတ်ပေးခြင်း။ (၂) Stock လက်ကျန်စာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း။ (၃) အရောင်းအဝယ်စာချုပ်များ၊ ငွေကောက်ခံရေးကိစ္စများအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ (၄) Customer များ၏သတင်းအချက်အလက်များအား Customer Service နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ (၅) Sale နှင့်သက်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များအား Sale Admin မှတဆင့် Sale ဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
အကျိုးအမြတ်: စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ဆုလာဒ်များ
- Retail company တွင်အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - Inventory control (or) Stock Controlling ကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ - Purchasing, space planning, allocation and detailing materialနဲ့ပက်သက်ပီး Knowledge ရှိရမည်။ - ဆိုင်ခွဲ၊ ရုံးချုပ်နှင့် supplier ကြား ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရမည်။ - အခြေခံ ငွေကြေးရှင်းတမ်း Accounting Flow ကိုနားလည်ရမည် ။ - Leadership & Communication skills ကောင်းမွန်ရမည်။ - Listening & Negotiation skills ကောင်းမွန်ရမည်။ - စိတ်ရှည်ပြီး အလုပ်ကို ရေရှည်လုပ်ကိုင်မည့်သူကို ဦးစားပေးမည်။
 စကားပြောပြေပြစ်ပြီး သွက်လက်ချက်ချာပွီး Suppliers များနှင့် Promotion, Pricing, Purchasing နှင့် ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ဆောင်ရွက်နိုင်သူ  အလုပ်လုပ်ရာတွင်စနစ်တကျရှိပြီး အဖွဲအစည်းမှသတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များကိုလိုက်နာနိူင်သူ  Microsoft Office ကို ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ  ရေရှည်လက်တွဲလုပ်နိူင်သူ
Sales & Marketing ၀န်ထမ်း
( ငွေရေးကြေးရေး အကြံပေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်) လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Real Hub Co.,Ltd.
- Searching for new clients who could benefit from your products inadesignated region - Travelling to visit potential clients - Establishing new, and maintaining existing, relationships with customers - Managing and interpreting customer requirements - Calculating client quotations - Negotiating tender and contract terms - Offering after-sales support services - Administering client accounts - Analyzing costs and sales - Preparing reports for head office - Meeting regular sales targets - Recording and maintaining client contact data - coordinating sales projects - Making technical presentations and demonstrating howaproduct will meet client needs - Solving client problems - Helping in the design of custom-made products
အကျိုးအမြတ်: Annual Bonus for normal business